» भ्वाईस अफ नेपालका उत्कृष्ट १० आवाज (भिडियो)
भ्वाईस अफ नेपालका उत्कृष्ट १० आवाज (भिडियो)
३ मंसिर २०७६, मंगलवार २१:०४
मकवानपुर, ०३ मंसिर । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ सिजन २ को उत्कृष्ट १० प्रतियोगीहरु छानिएका छन् । लाईभमा पुगेका १२ जना प्रतियोगीहरुबाट दर्शकको सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्दै १० प्रतियोगीहरु छानिएका हुन् । यस भिडियो सामग्रीमा सिजन २ का उत्कृष्ट १० आवाजहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ । भ्वाईस अफ नेपालका बारेमा अन्य जानकारीहरुका लागि हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोला ।
१) आरिफ रौफ, मकवानपुर– मकवानपुर निवासी आरिफ रौफ अहिले काठमाडौँमा बस्छन् । भोईस अफ नेपालको पहिलो सिजनमा समेत सहभागी भएका आरिफ पार्ट टाईम लेक्चररका रुपमा कार्यरत छन् । हार्डवेयरको व्यवसाय पनि गरिरहेका उनले केही चलचित्रका गीतहरु समेत गाएका छन् । २९ वर्षीय आरिफले ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काएका थिए । कोच आस्थाको टिममा भएका आरिफको भोटिङ कोड ०१ हो ।
२) अञ्जु राना मगर, चितवन–अञ्जु राना मगर चितवनकी हुन् । सानैदेखि गीत गाउन थालेकी अञ्जुले जीवनमा विभिन्न बाधाहरु पार गर्दै भोईसको मञ्चमा साँगितिक प्रतिस्पर्धा गर्न आईपुगेकी छिन् । उनी अहिले चर्चित ब्याण्डमा समेत आवद्ध छिन् । २२ वर्षीया अञ्जुले ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल भएकी थिईन् । कोच राजुको टिममा रहेकी अञ्जुको भोटिङ कोड ०२ हो ।
३) बलबहादुर राजवंशी, झापा–झापाको गौरदह निवासी बलबहादुर राजवंशी गाउँमा राजवंशी कुलमा नै परिचित नाम हो । संगीतको माध्यमबाट आफ्नो संस्कृति र भाषालाई समेत जोड दिँदै आएका बलबहादुरलाई गायनमा सबै गाउँवासीको साथ छ । ३२ वर्षीय बलबहादुर कोच प्रमोदको टिममा छन् । उनको भोटिङ कोड ०३ हो ।
४) विकास लिम्बु, झापा, हाल काठमाडौँ– नकआउट राउण्डमा पहिलो ‘बेस्ट पफर्मर अफ द डे’ समेत घोषित भएका विकास लिम्बु झापा निवासी हुन् । साँगितिक परिवारमा जन्मिएका विकासले सानैदेखि गीत गाउन थालेका हुन् । ५ वर्षदेखि काठमाडौँमा संघर्ष गरिरहेका विकासले संघर्षकै बिच गजल साँझमा गजल समेत गाएका छन् । उनले राम्रो प्ले ब्याक सिंगर हुने सपना पालेका छन् । उनी कोच दिपको टिममा छन् । उनको भोटिङ कोड ०४ हो ।
५) गीता शर्मा, सिक्किम– भारतको सिक्किम निवासी गीता शर्मा सँगीतमा लाग्न चाहानेहरुलाई सँगीतको मार्गमा डोराउन तल्लिन आवाज हुन् । सँगीतमा संघर्ष गरिरहेकी गीताको जीवनकथा निकै संघर्षपूर्ण रहेको छ । बुवाले परिवारलाई छोडेपछि पिडामा परेकी गीताले अध्ययन बिचैमा छोड्न बाध्य भएकी थिईन् । अध्ययन रोकिएपछि संगीतलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएकी गीता आफै कमाउदै सँगीत क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै छिन् । ३३ वर्षीया गीताले ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोच फर्काउन सफल भएकी थिईन् । उनी कोच राजुको टिममा छिन् । उनको भोटिङ कोड ०५ हो ।
६) मेचु धिमाल, मोरङ– प्ले सिंगरका साथै अभिनयमा समेत दख्खल राख्ने मेचु धिमाल मोरङ निवासी हुन् । साँगितिक करियरका दौरान गीतकारका रुपमा छवि बनाएकी मेचुले पछि आफुलाई म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने कलाकारका साथै गायिकाका रुपमा समेत परिचय बनाईन् । केही लोकप्रिय गीतहरु समेत गाईसकेकी उनले आफ्नै भाषामा पनि गीत तयार पारेकी छिन् । आफुलाई अहिले पनि सघर्षरत गायिका बताउने २१ वर्षीया मेचु कोच प्रमोदको टिममा छिन् । उनको भोटिङ कोड ०६ हो ।
७) राम लिम्बु, विर्तामोड, झापा–कोच प्रमोदको स्टील पावरबाट सेभ भएका राम लिम्बु अहिले भ्वाईसको मञ्चमा चम्किएका उत्कृष्ट नामहरुमध्ये एक हो । लाईभ राउण्डसम्म लगातार चकित पार्ने प्रस्तुति दिँदै आएका बिर्तामोड झापा निवासी रामले औपचारिक रुपमा कुनै सँगीत कक्षा लिएका छैनन् । तर स्थानीय ब्याण्डका दाईहरुसँगै गीत गाउँदै रामले आफुलाई निखारेका छन् । २३ वर्षीय राम दोस्रो सिजनको ब्लाईन्ड राउण्डमा चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल छैटौँ प्रतियोगी समेत हुन् । उनले लाईभ राउण्डमा बेस्ट पर्फर्मरको अवार्ड पनि पाएका छन् । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् । उनको भोटिङ कोड ०८ हो ।
८) सनिश श्रेष्ठ, कोटेश्वर, काठमाडौँ–हजुरबुवाबाट गीत गाउने प्रेरणा पाएका सनिश श्रेष्ठ कोटेश्वर काठमाडौँ निवासी हुन् । उनले हजुरबुवाले भजन गाएको देखेर सँगीतमा रुचि राखेका थिए । गीतार बजाउँदै गीत गाउँदै गरेका १९ वर्षीय सनिश भ्वाईसको दोस्रो सिजनमा ब्लाईन्ड अडिसनमार्फत चारै जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल पहिलो प्रतियोगी हुन् । उनको प्रस्तुति द भ्वाईस ग्लोबलको उत्कृष्ट ५ मा समेत पर्न सफल भएको थियो । उनी कोच राजुको टिममा छन् । उनको भोटिङ कोड ०९ हो ।
९) सञ्जय महत, सुकेधारा, काठमाडौँ–कोच राजुको टिमबाट कोच दिपले स्टिल गरेका सञ्जय महत सुकेधारा काठमाडाँै निवासी हुन् । सानैदेखि सुपर न्याचुरल पावरमा आकर्षित सञ्जयले दाँत पनि निकै लामो बनाएका छन् । रकिङ गीत गाउने सञ्जयलाई धेरैले ड्राकुल भनेर चिन्छन् । २६ वर्षीय सञ्जयको आवाज सुनेर ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोचहरु समेत फर्किएका थिए । उनी कोच दिपको टिममा छन् । उनको भोटिङ कोड १० हो ।
१०) याङ्की योल्मो, दार्जिलिङ–दार्जिलिङको आलुबारीबाट भ्वाईस अफ नेपालको दोस्रो सिजनमा सहभागी हुन आएकी याङ्कीको वास्तविक नाम याङ डोल्मो हो । हेलम्बुको सँस्कृतिसँग जोडिएकी याङ्की आफ्नो हजुरबुवालाई सँगीतको प्रेरणाको श्रोत मान्छिन् । ह्योल्मो सँस्कृतिको गीत समेत गाएकी २२ वर्षीया याङ्की ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोचलाई आफुतिर फर्काउन सफल प्रतियोगी समेत हुन् । साथै ब्याटलमा समेत चारै जना कोचको स्ट्याण्डिङ अवेशन पाएकी उनी कोच आश्थाको टिममा छिन् । उनको भोटिङ कोड १२ हो । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? को बन्ला भ्वाईस अफ नेपाल सिजन २ को विजेता ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
रजनीको ‘प्यार’ ले भ्वाईसको मञ्चमा तहल्का